‘सफलताको सूत्र इमान्दारिता’ - विवेचना
‘सफलताको सूत्र इमान्दारिता’
August 15, 2018 780 Views
हलेसी ट्रेड लिंक बिर्तामोड गोल्छा अर्गनाइजेसनले नेपालभर सञ्चालनमा ल्याएको बजाज तीन पाङ्ग्रेका ३५ भन्दा बढी आधिकारिक डिलरमध्ये उत्कृष्ट बन्दै ‘नेसन बेस्ट डिलर’ बनेको छ । भैरहवामा साउन २१ गते आयोजित बजाज आरई च्याम्पियन मिट २०१८ मा सो अवार्डबाट हलेसी ट्रेड लिंक सम्मानित भएको छ । विगत दुई वर्षदेखि बिर्तामोडमा सञ्चालनमा आएको हलेसी ट्रेड लिंकका सञ्चालक चूडामणि पौडेलसँग यसै सन्दर्भमा गरिएको कुराकानी :
बजाज थ्री ह्विलर (टेम्पो)सँग कसरी जोडिनुभयो ?
२०७० सालमा धुलाबारीमा सुरु गरिएको महेन्द्रा ट्रयाक्टरको ब्रान्च शोरुमसँग हलेसी ट्रेड लिंकको सुरुवात जोडिएको छ । महेन्द्रा गाडीको काम गरिरहँदा गोल्छा अर्गनाइजेसनले बजाजका तीन पाङ्ग्रे टेम्पो नेपाल भिœयायो । त्यसैबेला बजाज टेम्पोको मेचीका लागि डिलर आवश्यकता भनेर पत्रपत्रिकामा विज्ञापनमा आयो । हलेसी ट्रेड लिंक पनि त्यसका लागि इच्छुक छ भनेर निवेदन दिएपछि अर्गनाइजेसनको टिमले छनोट र्गयो । महेन्द्रा गाडीको व्यापारिक अनुभवले नै यो सम्भव भयो । गोल्छा अर्गनाइजेसन आफैँमा रेपोटेड कम्पनी, त्यसैले यस संस्थासँग जोडिएर काम गर्न पाउँदा म आफैँलाई भाग्यमानी ठान्छु । किनकि जोकोहीले चाहँदैमा यो संस्थासँग जोडिन गाह्रो छ । कामको मूल्यांकनपछि मात्र सक्षम मान्छेलाई मात्र दिन्छ । हलेसी ट्रेड लिंकले विगत २ वर्षदेखि बिर्तामोडमा रहेर ग्राहकमाझ बजाज टेम्पो र्पुयाउँदै आएको छ । कम्पनीको विश्वासलाई कायम राखेका छौँ, त्यसैले यो वर्ष हलेसीलाई नेसन बेस्ट डिलर अवार्ड पनि मिलेको छ ।
किन बजाज नै रोज्नुभो ?
ब्रान्ड । बजाजले बनाएका हरेक कुरा सफल छन् । गाडीको क्षेत्रमा मात्र होइन, इलेट्रिकलमा पनि उत्तिकै सफल छ । बजाज नेपालमा आए म यो ब्रान्डको काम गर्छु भन्ने मनमा थियो । यसबाट आफूलाई मात्र नाफा नभई सर्वसाधारण समेत स्वरोजगार हुन्छन् र उनीहरु सन्तुष्ट हुन्छन् भन्ने लागेर मेरो रोजाइमा बजाज रह्यो ।
डिलरले दिने सेवा सुविधाको कुरा गर्नुपर्दा के भन्नुहुन्छ ?
कम्पनीले दिएको भन्दा माथि उठेर हामीले ग्राहकको सेवा सुविधाका बारेमा सोचेका छौँ । यसको मुख्य कारण भनेको टेम्पो चलाउने सर्वसाधारण हुन् । गुजारा चलाउन र थोरबहुत बचत गर्नका लागि उनीहरु मेहनत गरिरहेका हुन्छन् । कम्पनीले ६ महिना वारेन्टी र ३-४ पटकसम्म सर्भिसिङ सुविधा दिन्छ । हाम्रो डिलरले वारेन्टी त त्यति नै हो, तर सर्भिसिङको सुविधा चाहिँ एक वर्षसम्म दिन्छ । एक वर्षसम्म सर्भिसिङको चार्ज लिँदैनौँ, सामानको चाहिँ लिन्छौँ ।
ग्राहकलाई के-कस्ता सुविधा दिइरहनु भएको छ ?
म हातमा कालो लगाएर आफैँ काम गर्ने मान्छे । यसको अर्थ म मिस्त्रीभन्दा जान्ने भन्ने होइन । तर, म सँगसँगै काम गर्न सक्छु । डिलरमा आउँदा को मालिक, को कामदार भन्ने छुट्याउन नयाँ मान्छेले सक्दैन । अर्थात, यहाँबाट खरिद भएको गाडी जहाँ जतिबेला बिग्रिए पनि हामी सेवाका लागि तत्पर रहन्छौँ । बाटोमै पुगेर बनाउँछौँ । बाटोमा आइपर्ने भइपरी समस्यालाई पनि हामीले नजिकबाट हेरिरहेका छौँ । जति टेम्पो कुदाउने साथीहरु हुनुहुन्छ, उहाँलाई म मनैदेखि माया गर्छु । त्यसैले ठोक्किएर कतै टाउको उहाँको फुट्दा, मलाई दुख्छ ।
तीन पाङ्ग्रेको पार्टपुर्जा पाइएन भन्ने गुनासो छ नि ?
अरुको डिलरको कुरा मलाई थाहा हुन्न । तर, हलेसी ट्रेड लिंकबाट टेम्पो खरिद गर्ने कुनै पनि ग्राहकले सामान पाउनु भएन भने उहाँले गाडी फिर्ता गर्दा हुन्छ । सामानमा महँगो-सस्तो हुन सक्ला । तर, पार्टपुर्जा नपाइने भन्ने समस्या छैन । सुरुमा महँगो थियो, अहिले मूल्य घटेर आएको छ ।
बिना धितो पनि टेम्पो बिक्री गरिरहनु भएको छ, यसो गर्दा समस्या पर्दैन ?
कुरा समस्याको भन्दा इमान्दारिताको हो । हामीले जतिलाई पनि बिना धितो गाडी दिएका छौँ, उहाँहरु इमान्दार हुनुहुन्छ भन्ने विश्वासले दिएका छौँ । समस्या नआउने भन्ने त होइन, तर हाम्रो उद्देश्य व्यापार गर्नु मात्र होइन, स्वरोजगार बनाउनु पनि हो । धितोमा दिँदा ब्याज अलिक कम लाग्छ, त्यसकारण प्राथमिकता धितोलाई नै दिने हो । तर, जसको केही छैन, जसलाई कसैले पत्याउँदैन तर ऊ इमान्दार छ भने हामीले उसको बारेमा सोच्नुपर्छ । चूडामणि पौडेलको सफलताको सूत्र भनेको इमान्दारिता हो । त्यसैले मसँग जोडिनु भएका साथीहरुले इमान्दारिता छोड्नु हुन्न भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास छ ।
धुलाबारी छाडेर बिर्तामोड नै किन रोज्नुभो ?
खासमा त यो कुरा कम्पनीकै योजना हो । तर, हामीले हेर्दा बिर्तामोड अहिले व्यापारिक केन्द्र बनिसकेको छ । कमर्सियल बैंक मात्रै ४०-५० वटा झन्डै पुग्छ होला यहाँ । अहिले हरेक हिसाबले बिर्तामोड केन्द्रित छ, व्यापारिक अग्रता छ । सायद त्यसैले कम्पनीले दीर्घ सोच राखेर व्यापारका लागि बिर्तामोडलाई रोजेको हुनुपर्छ ।
बजाज टेम्पो खरिद गर्न बिर्तामोड नै धाउनु पर्छ कि अन्य पनि छन् सेवा केन्द्रहरु ?
सर्भिस सेन्टरहरु धुलाबारी, चन्द्रगढी, बुधबारे, सुरुङ्गा लगायत ठाउँमा खोलेका छौँ । खरिद गर्न त्यहाँ कुरा राखेर पनि गर्न सकिन्छ । यहाँसम्म आइराख्नु पर्दैन । तर अप्ठ्याराहरु छन् भने र सबै कुरा बुझ्न, सेवा सुविधाका लागि ग्राहकले बिर्तामोड नै आउनु पर्ने हुन्छ । पैसा अपुग हुन्छ कहिलेकाहीँ, त्यसको लागि पनि सिधा सम्पर्क राख्दा राम्रो ।
टेम्पो चलाउँछु भन्ने साथीहरु हुनुहुन्छ भने उहाँहरुलाई ब्रान्ड चिनेर राम्रो किन्नुहोस् भन्छु । गरिबको लगानी डुब्नु हुँदैन भन्ने मेरो भित्री चाहना हो । हिजो महेन्द्राको काम गरिरहँदा मलाई जहाँसम्म लाग्छ सबै सन्तुष्ट हुनुहुन्थ्यो । आज बजाजको काम गरिरहँदा पनि सन्तुष्ट हुनुहुन्छ भन्ने लाग्छ । कोही-कोही आर्थिक हिसाबले ठास्सठुस्स रिसाउनु भाको होला । उहाँहरुलाई पनि नरिसाउनुहोस् भन्न चाहन्छु । आउनोस् भेट्नुहोस्, मैले कहाँ गल्ती गरेँ र तपाईंबाट कतै कमजोरी भएको छ कि ? नियालौँ र सँगसँगै अघि बढौँ भन्न चाहन्छु । गाडी लाने साथीहरुलाई किस्ता तिर्न गाह्रो भो भने आउनोस्, आफ्ना कुरा राख्नुहोस् भन्छु । तर, बिना सित्तीको खर्च गरेर, गाडी धन्क्याएर अल्छी गरेर नबस्न आग्रह गर्छु । हलेसीमा म मात्र होइन, सँगसँगै मेरो परिवार छ । काम गर्ने भाइहरु अब्बल हुनुहुन्छ, उहाँहरुले डिलरलाई लिड गरिरहुन भएको छ । हलेसी ट्रेड लिंक संस्था हो, यसलाई हामी विश्वासको जगमा उभ्याउने प्रयत्नमा छौँ । जसले भोलिका दिनमा ल्याएका जुनसुकै कुरा चलेर जाउन् भन्ने हाम्रो दीर्घकालीन सोच रहेको छ ।
Previous सरकारी स्वामित्वको जग्गाको छैन अत्तोपत्तो
Next मेची सहकारीको साधारणसभा